ဦး မကြည့်ရက်ဖူး သမီးရယ် – Grab Love Story
(၉) တန်းကျောင်းသူ “လင်းလဲ့ဖြူ” ဆိုလျှင် အ.ထ.က(၅) တစ်ကျောင်းလုံး မသိသူမရှိပေ။ လင်းလဲ့ဖြူက စာတော်ရုံသာမက အသားဖြူဖြူလေးနှင့် ချောလဲချောလှလဲလှသည်။ ကျောင်းမှာဘာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားဘဲရှိရှိ လင်းလဲ့ဖြူက ဗန်းကိုင်အဖြစ် အရွေခံရသည် ချည်းပင်ဖြစ်သည်။ မှန်သည်….. လင်းလဲ့ဖြူတစ်ယောက် အများအားကျအောင် အပြင်ပန်းအနေအထားတွင် မည်သို့ပင်အလှ တရားတွေ ဝေဆာနေပါစေ အတွင်းသဏ္ဍာန် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်တော့ လင်းလဲ့ဖြူ တစ်ယောက် မလှနိုင်ပေ။ လင်းလဲ့ဖြူ၏ ဖခင်မှာ မနှစ်က လင်းလဲ့ဖြူ (၈)တန်းအရောက် မိခင်ဖြစ်သူနှင့် ကွာရှင်းပြီး အိမ်မှထွက်သွားခဲ့သည်မှာ လင်းလဲ့ဖြူမှာ ဖခင်ဖြစ်သူအား တစ်ခါမှပြန်၍ မတွေ့ရတော့ပေ။ လင်းလဲ့ဖြူက မိခင်နှင့်အတူ ကျန်ရစ်ခဲ့ရသည်။
ဒီလောက်လှသော မာမီကို ဒက်ဒီဘာလို့ စွန့်လွှတ်သွားသလဲဆိုတာ လင်းလဲ့ဖြူ အဖြေမထုတ်နိုင်။မင်္ဂလာဈေးတွင်ရှိသော ဆေးဆိုင်ကြီးကို လင်းလဲ့ဖြူ၏မိခင် ကြည်ပြာလင်းက ဦးစီးရောင်းဝယ်၍ အိမ်၏ စီးပွားရေးကို ဦးဆောင်၍ နေရလေသည်။ ပြီးတော့ လင်းလဲ့ဖြူ၏ မိခင်ကြည်ပြာလင်းအပေါ် ဒီနှစ်ပိုင်းထဲတွင် လင်းလဲ့ဖြူ သိပ်ပြီးအမြင် မကြည်မလင် ဖြစ်ချင်လာသည်။ အိမ်တွင် ဒက်ဒီမရှိတော့သည့် နောက်ပိုင်း မာမီတစ်ယောက် အရင်ကထက် အလှတွေကို တအားပြင်လာသည်။ ပြီးတော့ ဂျော်နီသန်းဆိုသော လူကြီးတစ်ယောက်နှင့်လည်း တတွဲတွဲ လုပ်နေသည်။ အဲ့ဒီ ဂျော်နီသန်း ဆိုတဲ့လူကြီးက မာမီနဲ့အတူ အိမ်ကိုပိတ်ရက်တွေမှာ ပါလာတတ်ပြီး အိမ်တွင်ပင် မာမီနှင့် အတူ နေတတ်လေသည်။ အပျိုပေါက်အရွယ် သမီးလေးတစ်ယောက် အိမ်တွင်ရှိသည် ဆိုတာတောင် မာမီဂရုမစိုက် တော့ဘူးလားဟု လင်းလဲ့ဖြူ ဒေါသဖြစ်မိသည်။ မိန်းမတွေက တဏှာရာဂနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သားသမီးရင်းတောင်မှ ဒုက္ခပေးတတ်တာကို (၉)တန်းကျောင်းသူအရွယ် လင်းလဲ့ဖြူလေး မသိရှာသေးပေ။ အဲ့ဒီ ဂျော်နီသန်း ဆိုတဲ့လူကြီးကို လင်းလဲ့ဖြူ မျက်နှာကြောမတဲ့။
ကြည့်၍မရချေ။ သူ့ပုံစံကြီးကို ကြည့်ပါဦး။ နဲနဲနောနော ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမဟုတ်။ ဗလကြီးက အယ်နေသလို အရပ်ကြီးကလည်း မြင့်မြင့်ကြီးဖြစ်သည်။ အားလုံး ခြုံပြောရလျှင် ဗလကောင်းကောင်း ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းပေါ့၊ ပထမပိုင်းက အိမ်ကို ဂျော်နီသန်းဆိုတဲ့လူ ကြီးပါပါလာစဉ်က မာမီကပါ လင်းလဲ့ဖြူကို ဖာသိဖာသာနေသည်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ လင်းလဲ့ဖြူကို သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံးက သိသိသာသာကြီးပင် အတင်းလိုက်ရောပြီး ဂရုစိုက်ပြနေကြသည်။ အိမ်သို့ တစ်ပတ်တစ်ခါ ပါလာသော ဟိုလူကြီးကလည်း လင်းလဲ့ဖြူအတွက် လက်ဆောင်တွေ တစ်ပုံတစ်ပင် ဝယ်လာတတ်သည်။ ပြီးတော့ မာမီကိုယ်တိုင်ကလည်း လင်းလဲ့ဖြူကို အဲ့ဒီဂျော်နီသန်းဆိုတဲ့ လူကြီးနဲ့ရင်းနှီးအောင် အမျိုးမျိုးဖျောင်းဖျခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မာမီဟာ မာမီပါဘဲ လောကကြီးအလယ်မှာ ဒီသားအမိနှစ်ယောက် ထဲသာရှိကြတာမဟုတ်လား။ ဒီတော့ မာမီစိတ်ချမ်းသာရင် ပြီးရောဟု လင်းလဲ့ဖြူ ကိုယ်တိုင်လိုက်လိုက် လျောလျော နေခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်တော့ အဲ့ဒီဂျော်နီသန်း ဆိုတဲ့လူကြီးက ဈေးပိတ်ရက်မှသာ မဟုတ်တော့ဘဲ ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာလည်း အိမ်ကိုပါ ပါလာတတ်ပြီး ညအိပ်ကာ မနက် မာမီ ဆိုင်သွားတော့မှ မာမီနှင့်အတူ ပြန်သွားတတ်လေသည်။ လင်းလဲ့ဖြူက ည(၈)နာရီထိုးတာနဲ့ အပေါ်ထပ်ကို စာဖတ်စရာ တွေရှိရင်ဖတ်တယ် အိမ်စာ လေ့ကျင့်ခန်း တွေလုပ်တယ်။ ပြီးတော့ ညဝင်အိပ်တယ် ဒါက လင်းလဲ့ဖြူ နေ့စဉ် လုပ်နေ ကြဖြစ်သည်။ အိပ်ပြီဟေ့ ဆိုလျှင်လည်း တစ်နေ့လုံး ကျူရှင်တက်ရ၊ စာဖတ်ရ၊ ကျောင်းတက်ရနဲ့ မောမောပန်းပန်းနဲ့ အိပ်လိုက်တာ အရွယ်ကလည်း ကလေးသာသာဆိုတော့ ခေါင်းချရင် အိပ်ပျော်ရော။ ပြီးတော့ မိုးလင်းမှဘဲ တစ်ရေးနိုး တော့သည်။ ဒီလိုဆိုတော့ မာမီနဲ့ ဟိုလူကြီးအကြောင်းကို လင်းလဲ့ဖြူမသိနိုင်တော့ချေ။ ဒီနေ့ညနေပိုင်း ကျူရှင်မရှိ၍ လင်းလဲ့ဖြူ (၄)နာရီထိုးကတည်းက အိမ်သို့ပြန်ရောက်နေသည်။ ရေချိုး၊ ထမင်း စားပြီး အခွေထိုင်ကြည့်နေတုန်း ညနေ(၆)နာရီလောက်မှာ မာမီပြန်လာသည်။
ဟိုဂျော်နီသန်း ဆိုသော လူကြီးပါ ပါလာသည်။ “ ရော့….ဒါတွေက လင်းလဲ့အတွက် အန်ကယ်ဝယ်လာတာ… ” “ ဟယ်….အန်ကယ် ….အများကြီးဘဲ ….ကျေးဇူးဘဲ … ” အဝတ်အစားတွေသာမက စားစရာတွေလည်း ပါသည်။ လင်းလဲ့က ဂျော်နီသန်းပေးသော အထုပ်ကြီးကို လှမ်း၍ယူလိုက်သည်။ မာမီကတော့ အနားမှနေ၍ ပြုံးပြီးရပ်ကြည့်နေသည်။ ဂျော်နီသန်းပေးသော အထုပ်ကြီးကို ပွေ့ပိုက်၍ လင်းလဲ့ဖြူအပေါ်ထပ်သို့ပြေးတက်ခဲ့သည်။ အပေါ်ထပ်သို့ခြေချမိကာမှ သူမစားလက်စ အာလူးကြော်ထုပ် စားပွဲခုံပေါ်တွင် ကျန်ခဲ့တာကို သတိရ၍ တစ်ခါ ပြန်၍ ဆင်းယူရန် လက်ထဲမှ အထုပ်ကြီးကို လှေခါးဝ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ချ၍ လင်းလဲ့ဖြူလှေခါးကိုပြန်ဆင်းသည်။ လှေခါးငါး ထစ်လောက် ဆင်းပြီးသွားတော့ လင်းလဲ့ဖြူ အောက်ထပ်ကို မြင်လိုက်ရသည်။ “ အယ်…..တော့်…” လင်းလဲ့ဖြူ ပါးစပ်အဟောင်းသားလေး ဖြစ်သွားသည်။ အောက်ထပ်ဧည့်ခန်းထဲတွင် ဂျော်နီသန်းဆိုတဲ့ လူကြီး က မာမီကို မတ်တပ်ကြီး ဖက်၍နမ်းနေသည်။
မာမီကြည်ပြာလင်းက လင်းလဲ့ဖြူဖက်ကို ကျောခိုင်းထား၍ လင်းလဲ့ဖြူကို မတွေ့ရသော်လည်း ဂျော်နီသန်းဆိုတဲ့ လူကြီးကတော့ လင်းလဲ့ဖြူကိုလှမ်း၍ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ မာမီ၏ နှုတ်ခမ်းလုံးလုံးလေးကို အတင်းငုံ၍စုပ်နမ်းသည်။ မာမီတစ်ကိုယ်လုံး တွန့်တက်သွားပြီး ခြေဖျားလေး ထောက်ခါ မျက်နှာလေး ကော့တက်သွားပြီး ဂျော်နီသန်း၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို အတင်းပြန်၍ဖက်သည်။ လင်းလဲ့ဖြူရင်ထဲ ဟာခနဲဖြစ်သွားပြီး ယောင်ယမ်း၍လှေခါးထစ်ကို သုံးထစ်လောက် ဆင်းလိုက်မိပြီးမှ အသာ ကိုယ်ရှိန်သက်၍ရပ်ကာ ကြည့်နေမိသည်။ ဂျော်နီသန်းဆိုတဲ့လူကြီးက မျက်လုံးတစ်ချက်လှန်ကာ လင်းလဲ့ဖြူကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြန်သည်။ ပြီးတော့ မာမီ ကြည်ပြာလင်း၏ ခါးကိုသိုင်းဖက်ထားသော သူ့လက်ကြီးတစ်ဖက်က အောက်သို့ လျှောကျသွားပြီး မာမီရဲ့ တင်ပါးကားကားကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်သည်။ မာမီကိုယ်လုံးလေး လှုပ်ကနဲ လှုပ် ကနဲပင် ဖြစ်သွားရသည်။ မာမီ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုလည်း မလွှတ်။ ရပ်ကြည့်နေရင်းမှ လင်းလဲ့ဖြူ၏ တစ်ကိုယ်လုံး ခွန်အားတွေချိနဲ့၍လာသည်။
ရှေ့မှ လှေခါးလက်ရမ်းလေးကို သူမ၏ လက်ကလေးနှစ်ဖက်ဖြင့် အားပြုကိုင်ရင်း အသာလေးရပ်၍ ကြည့်နေမိသည်။ ဂျော်နီသန်းက ကြည်ပြာလင်း၏ နှုတ်ခမ်းတွေကို လွှတ်ပေးလိုက်တော့ မာမီကြည်ပြာလင်းက မျက်လုံးလေး မှိတ်ထားလျှက်မှ သူမမျက်နှာလေးကို ဂျော်နီသန်း၏ ရင်ခွင်ထဲတိုး၍ဝင်သည်။ ဂျော်နီသန်းဆိုတဲ့လူကြီးက မာမီနဖူးလေးကို ငုံ့နမ်းလိုက်ပြီး သူ့လက်ကြီးတစ်ဖက်က နှစ်ကိုယ်ကြား တိုးဝင်သွားပြီး မာမီရဲ့ နို့အုံထွားထွားကြီးတွေကို အင်္ကျီပေါ်မှပင် ကိုင်၍ဆုပ်နယ်သည်။ မာမီခမျာ ကိုယ်လုံးလေး လှုပ်လှုပ်သွားပြီး မျက်လုံးလေး မှိတ်ထားတဲ့ မာမီမျက်နှာလေးက ဂျော်နီသန်း၏ ရင်ဘတ်ကျယ်ကြီးမှာ လူးလိမ့်၍နေသည်။ မာမီ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ မသိပါဘူး။ မာမီကြည်ပြာလင်းရဲ့ လက်တွေက ဂျော်နီသန်း၏ ခါးကြီးကို အတင်းအကြပ် တိုးဖက်လိုက်တာ လင်းလဲ့ဖြူ သတိထားတွေ့လိုက်ရသည်။ ဂျော်နီသန်းလက်ကြီးတွေက မာမီနို့အုံကြီးတွေပေါ်က ဖယ်ခွာပြီး မာမီ့နောက်ကျောကို သိုင်းဖက်လိုက်ပြန်သည်။ ပြီးတော့ မာမီကျောပြင်လေးကို အသာအယာ ပွတ်ပေးသည်။
လင်းလဲ့ဖြူတစ်ကိုယ်လုံး ပုရွက်ဆိတ်အကောင်တစ်သောင်းလောက် တက်လာသလို တရွရွနှင့်နေရခက်လာ သည်။ ပြီးတော့ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အားအင်တွေက ချိနဲ့လာသည့် လင်းလဲ့ဖြူ ဆတ်ကနဲ မျက်နှာကို လှည့်ကာ သူတို့ ကို မျက်ကွယ်ပြုလိုက်ပြီး လှေခါးထစ်တွေကို တစ်လှမ်းချင်းနင်းကာ အပေါ်ထပ်ကိုပြန်ပြီး တက်လာခဲ့သည်။ လှေခါးဝ ကြမ်းပြင်တွင် ချထားသော ဂျော်နီသန်းပေးသော လက်ဆောင်ထုပ်ကြီးကိုပင် မယူနိုင်တော့ဘဲ သူမ၏ အိပ်ခန်းထဲ ပြေးဝင်ကာ အိပ်ယာပေါ်သို့ ခြေပစ်လက်ပစ်လှဲချလိုက်သည်။ “ဟင်…..ဘာတွေလဲမသိဘူး…” လင်းလဲ့ဖြူ သူမခါးမှ စကပ်လေးကိုမ၍ လှန်ကြည့်သည်။ အောက်ခံဘောင်းဘီပါးလေးက ပေါင်ကြားတွင် ရွှဲနစ်နေသည်။ လင်းလဲ့ဖြူ ကုတင်ပေါ်မှပြန်၍ ဆင်းလိုက်ပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ကာ ရေလဲထဘီ ဟောင်း လေးကိုယူ၍ သူမပေါင်ခွကြားကိုသုတ်ပြီး အိပ်ယာပေါ်သို့ ပြန်၍လှဲလိုက်သည်။ လင်းလဲ့ဖြူ၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှာ အသက်မပါ နှေးကွေး၍ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို လှုပ်ရှား၍နေသည်။ အိပ်ယာပေါ်တွင် လင်းလဲ့ဖြူ မျက်လုံးလေး မှိတ်၍ ငြိမ်နေသည်။ အမှန်ဆိုလျှင် မာမီကြည်ပြာလင်းက အသက်(၃၄)နှစ် သာရှိသေးသည်။ အပျိုတွေရှုံးလောက်အောင် လှသည့် အလှကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်သည်။
ဒါနဲ့များ ဒီလူကြီးကို ဘာလို့လက်ခံထားသလဲဆိုတာ လင်းလဲ့ဖြူ မစဉ်းစားတတ်ချေ။ သူတို့နှစ်ယောက် နမ်းနေသောပုံရိပ်က လင်းလဲ့ ၏မျက်စေ့ထဲမှ မထွက်ချေ။ သက်ပြင်းတွေ အခါခါချရင်း လင်းလဲ့ဖြူတစ်ယောက် အိပ်ယာပေါ်တွင် လူးလှိမ့်၍နေသည်။ တစ်နာရီဆိုသော အချိန်ဆိုသည်မှာ ဘာမှမကြာလိုက်သလိုပင်။ အိပ်ယာပေါ်တွင် မျက်လုံးလေး မှိတ်နေ သော လင်းလဲ့ဖြူ တစ်ယောက် သူမ၏အိပ်ခန်းထဲသို့ တစ်စုံတစ်ယောက် ဝင်လာသည်ဆိုသော အသိကြောင့် မျက်လုံးလေးကို အားယူ၍ ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ “ဟင်…..အန္ကယ်..” လင်းလဲ့ဖြူ မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားပြီး အံ့သြတကြီးရေရွတ်မိရင်း ထထိုင်လိုက်မိသည်။ လင်းလဲ့ဖြူ တွေ့မြင် လိုက်ရသည်ကတော့ သူမ၏ကုတင်ဘေးသို့ ရောက်နေသော ဂျော်နီသန်း အင်္ကျီမပါဘဲ အောက်တွင် ပုဆိုးတစ်ထည် ကို ဖြစ်သလိုဝတ်ထားသည်။ ဂျော်နီသန်းက လင်းလဲ့ဖြူကိုဘာမှမပြောဘဲ သူမ၏ ဝိုင်းဝိုင်းစက်စက်မျက်လုံးလေးများ ကို စိုက်ပြီးကြည့်နေသည်။ ပြီးတော့မှ သူမ၏မျက်နှာလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ညှပ်ကိုင်၍ ဆွဲယူလိုက်သည်။
“ ခ်စ္တယ်…….ကေလးရယ်.. ” ဝမ်းခေါင်းသံဖြင့် တုန်ခိုက်စွာမြည်တမ်းပြီး လင်းလဲ့ဖြူ၏ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည့် နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိကပ်စုပ်နမ်းပစ်လိုက်သည်။ လင်းလဲ့ဖြူ အစိမ်းသက်သက် သွေးသားလေးတွေ အလန့်တကြား ဖြစ်သွားပြီး လက် လေးတစ်ဖက်က ဂျော်နီသန်း၏ လည်ပင်းကြီးကို ပြန်၍ သိုင်းဖက်လိုက်မိသည်။ ဂျော်နီသန်းက သူမကို ရင်ခွင်ထဲ ထည့်၍ ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ထားသည်။ အတန်ကြာအောင် စုပ်နမ်းပြီးသော အခါတွင်တော့ သူမကိုပွေ့၍ အိပ်ယာထဲ ပြန်လှဲသိပ်လိုက်သည်။ ကောင်မလေး တစ်ကိုယ်လုံး တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။ ရီဝေသောမျက်လုံး အစုံနဲ့ ဂျော်နီသန်းကို မော့ကြည့်နေသည်။ ဂျော်နီသန်းက လင်းလဲ့ဖြူကိုငုံ့၍ကြည့်နေရာမှ ခေါင်းခါလိုက်ပြီး အခန်းထဲမှပြန်ထွက်ရန် လှည့်လိုက်သည်။ “ဟင်…အန္ကယ်…ဘယ္လဲ” လင်းလဲ့ဖြူ ဂျော်နီသန်း၏ လက်ကောက်ဝတ်တစ်ဖက်ကို အမိအရလှမ်း၍ဆွဲလိုက်သည်။ “ ကြာရင်မှားကုန်မယ်ကလေး……… အန်ကယ်ပြန်တော့မယ်…….” “ ဘာ…..ဘာ……မွားမွာလဲဟင်….” ဂျော်နီသန်း၏ လက်ကိုမလွှတ်ဘဲ အမောတကောမေးသည်။ “ အန်ကယ် မနေနိုင်တော့ဘူး ဒီမှာကြည့်ပါလား….” ဂျော်နီသန်းခါးမှ ဖြစ်သလိုဝတ်ထားသော ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်သည်။
“ အာ ဟာ……ကြောက္စရာကြီး” မတ်တောင်နေသော ဂျော်နီသန်း၏ စံချိန်မှီလီးကြီးကို ကြည့်ပြီး လင်းလဲ့ဖြူ ဆတ်ကနဲ တုန်သွားသည်။ ပြီးတော့ မျက်စိနှစ်လုံးကို မှိတ်ချလိုက်သည်။ ဂျော်နီသန်းက လင်းလဲ့ဖြူ၏ လက်လေးတစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး သူ၏ လီးတန်ကြီးပေါ် တင်၍ သူမ၏လက်ချောင်းလေးတွေကို လီးတန်ကြီးအား ဆုပ်ပေးလိုက်သည်။ ပူနွေး၍ မာကျောလှသော အချောင်းကြီးက စေးကပ်ကပ်နှင့် ဖြစ်နေသည်။ မာမီကိုလုပ်ထားတဲ့ အရည်တွေလား မသိဘူး လီးချောင်းကြီးကို လက်လေးဖြင့် အသာလေး ညှစ်ကိုင်လိုက်ရင်း အိပ်ယာပေါ်တွင် ဆန့်ထားသော သူမ၏ ခြေထောက်လေး နှစ်ချောင်းကို တစ်ချောင်းနှင့် တစ်ချောင်းလိမ်၍ ညှပ်လိုက်ကြောင်း တွေ့လိုက်ရသည်။ လီးချောင်းကြီး၏ အတွေ့က လင်းလဲ့ဖြူ၏ သွေးသားတွေကို ဆူပွက်စေသလို နုညက်သော သူမ၏လက်လေး အထိအတွေ့ကလည်း ဂျော်နီသန်း၏ လီးကြီးကို တခဏအတွင်း ပို၍ မာကျောလာသည်။ “ အန်ကယ်…..မနေနိုင်တော့ဘူး လင်းလဲ့ရာ…..” “ ဘာ……ဘာလုပ်မလို့လဲ…..အန်ကယ်ရယ်….” “ ချစ်မလို့ပေါ့……လင်းလဲ့ရဲ့…” ပြောပြောဆိုဆို ဂျော်နီသန်းက ကုတင်ပေါ် လှိမ့်တက်လိုက်ပြီး လင်းလဲ့ဖြူ၏ ရင်ဘတ်ပေါ် အသာမှောက်ချ လိုက်ရာမှ သူမ၏နီရဲနေသော နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို စုပ်နမ်းလိုက်ပြန်သည်
လက်တစ်ဖက်ကလည်း လင်းလဲ့ဖြူ၏ အင်္ကျီတွေပေါ်မှနေ၍ နို့လေးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့ လင်းလဲ့ဖြူ ခါးလေးကော့တက်သွားသည်။ လင်းလဲ့ဖြူ ခမျာ တွန့်တွန့်လူးနေရှာသည်။ ဂျော်နီသန်းက လင်းလဲ့ဖြူ၏ အင်္ကျီကြယ်သီးလေးများကို တစ်လုံးချင်း ဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် သူမကို အတန်ငယ် စောင်းပေးလိုက်ပြီး ဘရာစီယာချိတ်ကိုဖြုတ်ကာ ဘရာစီယာလေးကို ရင်ဘတ်က နေခွာလိုက်တော့ ဗမာကြက်ဥလောက်ရှိသော သူမ၏ ဖောင်းဖောင်းအိအိ နို့လေးတွေက ထွက်ပေါ်လာသည်။ နီရဲသော နို့သီးခေါင်း လေးတွေက ပြားကပ်နေသည်။ နို့သီး ခေါင်းနီတာရဲလေးများကို လက်နဲ့ထိုးကော်ပြီး အသာဖွဖွလေး ပွတ်ချေပေး လိုက်တော့ လင်းလဲ့ဖြူ ဒူးကလေးတွေ ဆတ်ကနဲထောင်လာပြီး စုလိုက်ကားလိုက်ဖြင့် ခေါင်းလေးကို ဘယ်ညာရမ်း နေတော့သည်။ “ အိုး…..အိုး….အားလားလား….အန်…အန္ကယ်…. ဟာ….ဟာ့…” လင်းလဲ့ဖြူစကားမဆုံးလိုက် ဂျော်နီသန်းက သူမ၏နှုတ်ခမ်းတွေကို ဖိကပ်စုပ်နမ်း ပစ်လိုက်သည်။ ထိုသို့ စုပ်နမ်းရင်း လက်များကလည်း သူမ၏နို့လေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်ချေ၍နေသည်။
လင်းလဲ့ဖြူ သိပ်ပြီး ကြောက်နေပုံရပေမယ့် တစ်ခါမှ မတွေ့ကြုံဖူးသေးတဲ့ အတွေ့အာရုံအရသာမှာ ရစ်မူးနေမိပြီး ဂျော်နီသန်းကို ငြင်းဆန်ခြင်း မပြုမိပေ။ ဂျော်နီသန်းက သူမ၏နို့လေးတွေကို တယုတယဖြင့် နမ်းရှိုက်လိုက်ရင်း သူ့လက်က ဝတ်ထားတဲ့ စကပ်လေးပေါ်ကနေ လင်းလဲ့ဖြူရဲ့ပေါင်ကြားကို စမ်းလိုက်သည်။ ကောင်မလေး အောက်ခံဘောင်းဘီ ဝတ်မထားကြောင်း သိလိုက်ရသည်။ ပေါင်ရင်းနှင့် ဝမ်းဗိုက်သားလေးတွေကို ပွတ်ပေးရင်း စကပ်လေးကို တဖြေးဖြေး တရွေ့ရွေ့ခါးဆီသို့ ဆွဲလှန်တင်လိုက်သည်။ (–) နှစ်သမီးနဲ့မလိုက် ဖောင်းမို့မို့ ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းနှင့် အမွှေးနု ရေးရေးလေးဖြင့် စောက်ဖုတ်လေးသည် တင်းတင်းမာမာလေး ထွက်ပေါ်လာသည်။ တင်းတင်းစေ့ကပ်နေသော အကွဲကြောင်းလေး၏ ထိပ်နားတွင်တော့ အစိလေးက ပြူးပြူးလေး ထွက်နေသည်။ ဂျော်နီသန်းက လင်းလဲ့ဖြူ၏ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ဆွဲမလိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ပေါင်တွင်းကြောလေးတွေ ထောင်ထလာတဲ့အထိ ဆွဲကားပစ်လိုက်တော့ ကောင်မလေး၏ ပစ္စည်းလေးက အတန် ငယ်ပြဲဟသွားသည်။
အစေ့လေးက မန်ကျည်းစေ့လောက် ပြူး၍ထွက်လာသည်။ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုနဲ့ အစိလေးကို အသာပွတ်ပေးလိုက်သည်။ “ အိုး…..အား……ဟား….အန်…အန္ကယ်….” လင်းလဲ့ဖြူမှာ မချိမဆန့်လေး ညီးညူလိုက်ပြီး ပက်လက်အိပ်နေရာမှ ဂျော်နီသန်း၏ လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး ဂျော်နီသန်း၏ မျက်နှာအနှံ့ကို ဒလစပ်နမ်းလိုက်တော့သည်။ ဂျော်နီသန်းမှာ လင်းလဲ့ဖြူ၏ ဘေးသို့ဝင်၍ လှဲအိပ်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် လုံးကျစ်မာခဲနေသော သူမ၏ နို့အုံလေးတစ်ဖက်ကို ငုံခဲလိုက်သလို ကျန်သော နို့တစ်ဖက်ကိုလည်း လက်ဖဝါးဖြင့် အုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး နယ်ဖတ်ပစ်လိုက်သည်။ “ အိုး…..အင်း….အိုး…..အိုး……ဟင်း…..ဟင်း….. ဟင်း…” လင်းလဲ့ဖြူတွန့်လိမ်ကောက်ကွေး၍သွားသည်။ ဂျော်နီသန်း သူမ၏ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ ဒီလိုနှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိကပ်စုပ်နမ်းလိုက်ပြီး သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးတွေအား လျှာဖျားနှင့် ပွတ်ပေးသလို လင်းလဲ့ဖြူ၏ အာခေါင်ထဲထိ ထိုးမွှေလိုက်သည်။ နောက် သူမ၏ လျှာလေးကိုလည်း သူ့လျှာကြီးနဲ့ ကလိရင်း ဂျော်နီသန်း၏ လက်တစ်ဖက်က လင်းလဲ့ဖြူ၏ ပေါင်ခြံကြားထဲက ဆီးခုံမောက်မောက်လေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းသား လေးတွေတစ်ဝိုက်ကို ဖွဖွလေးလျှောက်ပြီး ပွတ်နေလိုက်သည်။
လင်းလဲ့ဖြူတစ်ယောက် တွန့်တွန့်လူးနေတဲ့ကြားက သူမ၏ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုစေ့လိုက်ကားလိုက်ဖြင့် ဂနာမငြိမ်ဖြစ် ၍နေလေသည်။ ဂျော်နီသန်းက လင်းလဲ့ဖြူ၏စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြား အကွဲကြောင်းလေး အတိုင်း အထက်အောက် မထိတထိလေး ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်။ “ အင့်….ဟင့်….အိုး……ဟင်း…..ဟင်း..” တဟင်းဟင်းနဲ့အဖျားတက်သလို ညီးညူရင်း ဖင်လေးကခါ၍နေရှာသည်။ ဂျော်နီသန်း၏ ပွတ်သပ်နမ်းရှုတ်မှု တို့ကြောင့် လင်းလဲ့ဖြူ ကာမဆန္ဒတွေ တရှိန်းရှိန်းတက်ကြွလာပြီး နို့သီးခေါင်း လေးတွေကထောင်တက်၍လာသည်။ မတ်ထောင်တက်လာသောနို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ဂျော်နီသန်းက လက်မနဲ့လက်ညှိုးကြားမှညှပ်ပြီး မနာတနာလေး ပွတ်ချေလိုက်ပြန်သည်။ “ အ….အို….အိုး……..ဟင်း……ဟင့်…..အန် အန်ကယ်” လင်းလဲ့ဖြူတွန့်လိမ်ပြီး ညီးညူလိုက်သည်။ ဂျော်နီသန်း သူမ၏နို့လေးတွေကို အားရအောင် ပွတ်ချေပြီးမှ သူမ၏ပေါင်ကြားထဲက ချစ်စရာ၊ စွဲမက်စရာကောင်းလှတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်နဲ့အုပ်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်တော့ အကွဲကြောင်းလေးမှာ အရည်လေးတွေ စိုနေတာကို စမ်းမိလိုက်သည်။
ဂျော်နီသန်းက အသာလက်ညိုးလေးနဲ့ သူမ၏ စောက်ပတ်လေးထဲ ထိုးထည့် ကြည့်လိုက်တော့“ပြွတ်” ကနဲ လက်က တစ်ဆုံးဝင်သွားသည်။ လင်းလဲ့ဖြူလည်း.. “ ဟ…အင့်…..ဟင့်…..အင်း….အင်း…” ဆိုပြီးခါးလေးကော့တက်သွားသည်။ ဂျော်နီသန်းက သူမ၏ နို့လေးတွေကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ အသံမြည်တဲ့အထိစို့ လိုက် ပါးဖောင်းဖောင်းလေးကို နမ်းလိုက် တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော သူမ၏နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်လိုက်နဲ့ အစွမ်းကုန် နှိုးဆွ၍နေသည်။ လင်းလဲ့ဖြူ၏ စောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးလိုက်သွင်းလိုက်လုပ်နေတဲ့ ဂျော်နီသန်း၏ လက်ညိုးတစ်ချောင်းမှာလည်း အရည်တွေကြောင့် စိုရွှဲ၍နေပြီ။ ဂျော်နီသန်းက အတန်ကြာတဲ့အထိ လက်ညိုးကို စောက်ခေါင်းထဲ ထိုးလိုက် သွင်းလိုက် လုပ်ပေးနေပြီးမှ လက်ခလယ်ကိုပါ လက်ညိုးနဲ့ပူးပြီး လက်ချောင်းနှစ်ပူးကို လင်းလဲ့ဖြူ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ “ အား….နာတယ်….အန္ကယ်….” သူမ၏စကားကို ဂျော်နီသန်းက ဂရုမစိုက်တော့ပဲ သူမ၏စောက်ပတ်ထဲ ဝင်နေသော လက်နှစ်ချောင်းစလုံးဖြင့် အထဲကို ထိုးမွှေကလိနေသည်။ လင်းလဲ့ဖြူတစ်ယောက် ခြေထောက်လေးတွေကို ထောင်လိုက်၊ ကားလိုက် စေ့လိုက်ဖြစ်နေသည်။ “
အား….အား…..အန်ကယ်….လင်းလဲ့….မ… အား…. မနေတတ်… တော့ဘူး…အိုး ထွက်ကုန်ပြီ…” လင်းလဲ့ဖြူ စောက်ခေါင်းထဲရှိ ဂျော်နီသန်း၏ လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းစလုံး ချွဲကျိကျိ အရည်ပြစ်ပြစ်များနှင့် စိုစွတ်သွားသည်။ လင်းလဲ့ဖြူတစ်ယောက် မအောင့်နိုင်တော့ဘဲ ပထမဆုံးအချီ ပြီးသွားသည်။ လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းကို ခဏကြာအောင် ဆက်ပြီးမွှေနေပြီးမှ အသာလေးဂျော်နီသန်းက ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် ဂျော်နီသန်းက လှဲနေရာမှထလိုက်ပြီး လင်းလဲ့၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားတွင် ဒူးထောက်ပြီး နေရာယူလိုက်သည်။ သူမပေါင်နှစ်ချောင်းကို အသာလေးထပ်ပြီး ဖြဲကားလိုက်သဖြင့် ရွှဲစိုနေသော စောက်ဖုတ်လေးမှာ နီရဲပြဲ အာသွားသည်။ ဂျော်နီသန်းက သူမပေါင်နှစ်ချောင်းအား ဆွဲမလိုက်ပြီး သူ့ပေါင်တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီ တင်လိုက်တော့ စောက်ဖုတ်လေးက ပိုပြီးပြဲအာသွားသည်။ အဲ့ဒီနောက် ဂျော်နီသန်းက မာကျောတင်းပြောင်နေသော သူ့လီးကြီးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ အရင်းကနေကိုင်ပြီး လင်းလဲ့ဖြူ၏ စောက်ခေါင်းဝတွင် တေ့လိုက်ကာ လီးထိပ်ကြီးနဲ့ စောက်ပတ်ဝလေး ပတ်လည်ကို ထိပြီးပွတ်ပေးလိုက်တော့ လင်းလဲ့ဖြူမှာ တဆတ်ဆတ် တုန်သွားသည်။ ဒီလို ပွတ်နေရာက နေလီးထိပ်ကြီးနဲ့ သူမရဲ့စောက်စေ့လေးကို ဆတ်ကနဲ ထိုးလိုက်သည်။ “ အိုး….အား…..အန်ကယ်….အဟင့်…” လင်းလဲ့ဖြူမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ညည်းညူနေသည်။
ပြီးမှလီးထိပ်ကြီးကို စောက်ခေါင်းဝမှာ အသေအချာ တေ့ပြီး ဆတ်ကနဲထိုးသွင်းလိုက်သည်။ “ ပြွတ် အား……ဟား……အ….နာ….နာတယ်….အီး…. ဟီး…..ဟီး….” ဂျော်နီသန်း၏ လီးထိပ်ကြီးက လင်းလဲ့ဖြူ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ငြိမ့်ကနဲနစ်ဝင်သွားသည်။ လင်းလဲ့ဖြူမှာ ထွန့်ထွန့်လူးပြီး မျက်ရည်တွေ စီးကျလာသည်။ ဂျော်နီသန်းက လီးကိုဆက်၍ မသွင်းသေးသော်လည်း ကျွတ်မထွက်အောင် အသာလေး ဖိထားလိုက်ပြီး ခါးကိုကုန်းကာ သူမ၏နှုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းလိုက်သလို လက်တွေကလည်း နို့တွေကို ပွတ်သပ်ဆုပ်ချေပေးသည်။ လင်းလဲ့ဖြူ၏ တစ်ကိုယ်လုံး ဖြတ်ဖြတ်လူးနေသည်။ တစ်ဖြေးဖြေး စီးကျနေတဲ့ မျက်ရည်တွေကတော့ ရပ်သွားသည်။ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေး တစ်ဖြေးဖြေး ငြိမ်ကျသွားတော့မှ လီးကြီးကိုတစ်ခါ ဖိပြီး သွင်းလိုက်ပြန်သည်။ “ျဗစ်…..ျဗစ်…အာ….အား….ကျတြ်….ကျတြ်….နာ….. နာတယ်…. အန္ကယ်….” လင်းလဲ့ဖြူ တစ်ယောက် ကော့တက်သွားပြီး ညီးညူလိုက်ရပြန်သည်။
မျက်လုံးမှာ မျက်ရည်လေးတွေ ပြန်ပြီး ဝဲလာသည်။ ဂျော်နီသန်း၏ လီးကြီးကလင်းလဲ့ဖြူ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ သုံးပုံ တစ်ပုံခန့် မဆန့်မပြဲ နစ်ဝင်၍သွားသည်။ ဂျော်နီသန်းက သူမ၏ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို လက်နဲ့ အသာအယာပွတ်လိုက် မနာတနာလေး ကုတ်ဆွဲလိုက် စောက်မွှေး ပါးပါးလေးတွေကို အသာအယာလေး ပွတ်ပေးလိုက် စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် လုပ်ပေးနေသည်။ လင်းလဲ့ဖြူမှာ ခေါင်းလေးတခါခါနှင့် တဟင်းဟင်း ညီးညူ၍နေသည်။ ဂျော်နီသန်းက စောက်ခေါင်းထဲ ဝင်နေသော သူ့လီးသုံးပုံတစ်ပုံခန့်နှင့်ပင် အသာလေး ညှောင့်၍လိုးနေရင်းက သူ့လီးကြီးကို တစ်ချက်ဖိသွင်းလိုက် ပြန်သည်။ “ျဗစ်…..အိုး…..အို….နာ…နာတယ်…အား…. အား.. နာတယ်… အန္ကယ်….ကျတ္တြယ်….” ဂျော်နီသန်းက လင်းလဲ့ဖြူ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် ဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ သူ့လီးကြီးကို အသာလေး ဆွဲပြီး အထဲမှာ လီးထိပ်ကြီး ကျန်ရုံသာ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ “ အာ…အာ…အင်း…အင်း…ဟင်း…” လင်းလဲ့ဖြူ အမောတကော သက်ပြင်းချလိုက်ပြန်သည်။ သူမ၏စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားလေး နှစ်ခုက လီးကြီးကိုငုံခဲပြီး ဖုထစ်မောက်ကြွလာသည်။
ဂျော်နီသန်းက သူ၏လက်မထိပ်ဖြင့် စောက်စိလေးကို ပွတ်ချေလိုက်ပြန် သည်။ “ အာ….ဟာ….အင်း…အီး….အူး….အိုး…” လင်းလဲ့ဖြူ ခါးလေးကော့ ရင်လေးမော့တက်လာတဲ့အခိုက်မှာဘဲ လီးကြီးကိုစောစောကဝင်ထားသလောက် ဘဲချိန်ဆပြီး ပြန်ထိုးထည့်လိုက်ပြန်သည်။ “ ဗြစ်…ပြွတ်…..အာ….အင်း……ကျွတ်…..ကျွတ်….” “ စောစောကလောက် မနာတော့ဘူးမို့လား….” “ အင်း….ဟုတ်……ဟုတ်တယ်… ” ဂျော်နီသန်းက လီးထိပ်ကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲမှာ ဝင်သလောက် တစ်ခါစိမ်ထားလိုက်ပြီး သူမ၏ နို့လေး နှစ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့စုံကိုင်ပြီး ဆုပ်နယ်ကာ နို့သီးလေးတွေကိုလည်း ပွတ်ချေပေးပြန်သည်။ လင်းလဲ့ဖြူ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ သုံးပုံနှစ်ပုံမျှဝင်နေသော လီးကြီးမှာလည်း လိုးချင်လွန်းသဖြင့် ဒေါမာန်တွေ ထနေသည်။ တင်းကနဲ တင်းကနဲ ဆစ်ကနဲ ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ် ဖြစ်နေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေသော အတွေ့က နုဖတ်နေသော လင်းလဲ့ဖြူ၏ စောက်ပတ် အတွင်းသားလေးတွေက တွေ့ထိ ခံစားသိရှိရပြီး လင်းလဲ့ဖြူမှာ စိတ်တွေထသထက်ထကာ အရည်ကြည်တွေမှာ စောစောက ပြီးထားသော ခပ်ပြစ်ပြစ် အရည်များနှင့်ရော၍ ရွှဲနစ်လာသည်။
ဂျော်နီသန်းက လီးကြီးကိုဝင်သလောက် ထပ်၍ညှောင့်လိုး လိုးပြန်သည်။ “ ပြွတ်….ပလွတ်….ပြွတ်….ပြွတ်…..အင်း….. အင်း…..ဟင်း….” စောက်ခေါင်းထဲကိုလီးကြီးသွင်း၍ ညှောင့်ရင်းနို့နှစ်လုံးကိုပါစုံကိုင်ပြီး ဆုပ်နယ်ခံနေရတော့ လင်းလဲ့ဖြူမှာ ထူးခြားသောအရသာတွေ ဆူဝေ၍လာသည်။ ခံစားလာရသောအရသာက နာကျင်တာထက် တစ်ဖြေးဖြေးသာလွန် လာပြီး နာကျင်မှုကို ဖုံလွှမ်း၍လာသည်။ ဂျော်နီသန်းလုပ်နေပုံမှာလည်း မြေကြီးထဲသို့တိုင်တစ်တိုင်စိုက်သလို ဆွဲထုတ်လိုက်၊ စိုက်လိုက်၊ နှဲ့ပြီးတွင်းကို ချဲ့လိုက် ပြန်ပြီးဖိသွင်းလိုက်နှင့် ဖြစ်နေသည်။ ဝင်သလောက် လီးသုံးပုံနှစ်ပုံခန့် နှင့်ပင် ခဏကြာ ညှောင့်လိုးနေရာမှ စောစောကလိုပင် လက်မထိပ်ဖြင့် စောက်စိလေးကို ပွတ်ချေပေးလိုက်ပြန်သည်။ “ အာဟ…..အီး…..အင်းဟင်… ဗြစ်…အား…. အီး… ကျွတ်… ကျွတ်…..ကျွတ်…” လီးဖြင့်ညှောင့်လိုးလိုးရင်း စောက်စိကို အပွတ်ခံလိုက်ရတော့ လင်းလဲ့ဖြူမှာ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြင့် လူးလှိမ့်သွားခိုက် ဂျော်နီသန်းက သူ့လီးကြီးကို တစ်ခါထပ်၍ ဖိသွင်းလိုက်ပြန်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ လင်းလဲ့ဖြူ နာတယ်လို့ မပြောတော့ဘဲ စုပ်ကလေးသာ တကျွတ်ကျွတ်နဲ့သပ်ပြီး အသားလေးတွေ တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်သွားရရှာသည်။ လီးကတော့ စောစောကလောက် လက်တစ်လုံးခန့် ပို၍ဝင်သွားသည်။
တဆုံးဝင်ရန် အပြင်တွင်လက်နှစ်လုံးလောက် ကျန်သေးသည်။ ဂျော်နီသန်းက စောစောက နည်းအတိုင်းလီးကို ဖြေးဖြေးဆွဲထုတ်လိုက်တော့ လင်းလဲ့ဖြူ၏ စောက်ပတ်ဝ အသားလေးတွေက ကပ်ပြီးစို့ထွက်ပါလာကာ လင်းလဲ့ဖြူ၏ ဖင်ကြီးကလည်း အိပ်ယာပေါ်မှ ကြွ၍ ပါလာသည်။ “ အိုး….အိုး…..အင်း…..အင်း….” ဂျော်နီသန်းက လီးကိုတစ်ခါထပ်၍ ညှောင့်ပေးပြန်သည်။ ဒါပေမယ့် စောစောကလို နဲနဲကြာအောင်တော့ မညှောင့်တော့ပေ။ ဂျော်နီသန်းမှာလည်း လိုးချင်စိတ်တွေက ပြင်းထန်နေပြီး ကာမစိတ်တွေက အဆမတန် တက်နေသည်။ ထို့ကြောင့် လေးငါးကြိမ်မျှ ညှောင့်ပေးပြီး စောက်စိခလုပ်လေးကိုပင် မနှိပ်တော့ဘဲ လီးကြီးကို တစ်ဆုံး ဆောင့်သွင်း လိုက်တော့သည်။ “ ဗြစ်…. ဗြစ်… ပြွတ်…… ဒုတ်…. အား…. နာ…. တယ်….. အီး…. ဟီး…. အင်း…. နာ အထဲ….. အထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေတာဘဲ …. ကွဲများ…. ကွဲသွားလား အသိဘူး….အင်း….ဟင်း….” လင်းလဲ့ဖြူ ဆတ်ဆတ်ခါသွားပြီး တောင်စဉ်ရေမရ စကားတွေ လျှောက်ပြောနေသည်။ ဂျော်နီသန်းကဘာမှမပြောဘဲ စောက်ခေါင်းထဲမှ တစ်ဆုံးသွင်းထားသော သူ့လီးကြီးကို အသာလေး ဖိကပ်သွင်းထားလိုက်ပြီး သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချကာ တစ်ဆတ်ဆတ် တုန်နေသော နှုတ်ခမ်းရဲရဲလေးတွေကို ခပ်မျှဉ်းမျှဉ်းလေး စုပ်နမ်းပေးသည်။
လင်းလဲ့ဖြူနှင့်ဂျော်နီသန်းတို့ နှစ်ယောက်စလုံး နှစ်ကိုယ်လုံးတွင် ချွေးများပြန်နေသည်။ အမှန်တော့ ချွေးပြန်တာ သူတို့နှစ်ယောက်ထဲသာ မဟုတ်ပါ။ အခန်းဝတွင် ထဘီရင်လျှားလေးနှင့် တံခါးထောင့်မှ မျက်နှာတစ်ခြမ်း ထုတ်ကာ အိပ်ခန်းထဲသို့ ကြည့်နေသော ကြည်ပြာလင်းမှာလည်း သူတို့ကိုကြည့်ရင်းချွေး တွေပြန်နေသည်။ စောစောက ဂျော်နီသန်းနှင့် ကြည်ပြာလင်းတို့သည် ဧည့်ခန်းထဲတွင် နမ်းကြရင်း တဖြေးဖြေး တရွေ့ရွေ့နဲ့ အိပ်ခန်းထဲသို့ ရောက်လာခဲ့ကြပြီး အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ကာ ကာမစပ်ယှက်ခဲ့ကြသည်။ ထုံးစံအတိုင်း ဂျော်နီသန်း တစ်ချီပြီးလျှင် ကြည်ပြာလင်းက နှစ်ချီပြီးခဲ့ပြီး နုံးခွေကာဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့်ပင် တခဏတာ ကြည်ပြာလင်း အိပ်ပျော်သွားကြသည်။ ညသန်းခေါင်ကျော် တစ်နာရီခွဲ နှစ်နာရီခန့်တွင် တရေးနိုးလာပြီး နောက်ထပ် တစ်ချီတစ်မောင်း ထပ်၍လိုးနေကြဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင်တော့ ကြည်ပြာလင်းမှာ မသောက်စဖူး ညနေဘက် အိမ်အပြန်တွင် လဘက်ရည် သောက်လာခဲ့ သဖြင့် ခဏတာမျှသာ အိပ်ပျော်သွားပြီး ပြန်၍နိုးလာခဲ့သည်။
သူမနိုးလာခဲ့တော့ အနားတွင် ဂျော်နီသန်းကို မတွေ့ ရသဖြင့် နောက်ဖေးအိမ်သာသို့ သွားကြည့်သည်။ မတွေ့ ဧည့်ခန်းထဲသို့ သွားကြည့်သော်လည်း မတွေ့သဖြင့် စိတ်ပူ၍ ခေါင်းနပမ်းကြီးကာ အပေါ်ထပ်ရှိ သမီးဖြစ်သူ လင်းလဲ့ဖြူ၏ အိပ်ခန်းဆီသို့ တက်၍ကြည့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လင်းလဲ့ဖြူ၏ အိပ်ခန်းဝသို့အရောက် ဂျော်နီသန်းနှင့် လင်းလဲ့ဖြူတို့၏ အဖြစ်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရပြီး ဒေါသဖြင့် အိပ်ခန်းထဲ ဝင်မည်အလုပ် ကြည်ပြာလင်း၏ မျက်လုံးများက ဂျော်နီသန်း၏ လီးကြီးအထဲသို့ တစ်ဝက်လောက် ဝင်နေပြီဖြစ်သော သမီးဖြစ်သူ လင်းလဲ့ဖြူ၏ စောက်ပတ်လေးကို ကြည့်လိုက်မိသည်။ မဆန့်မပြဲ ဝင်နေသော လီးကြီး၏ ပတ်လည်တွင် ကိုင်ဆုတ်ထားသလို ဖြစ်နေသော လင်းလဲ့ဖြူ၏ စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေမှာ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေပြီး လင်းလဲ့ဖြူ၏ ပြန့်ပြူးချပ်ရပ်နေသော ဝမ်းဗိုက်သား ဖွေးဖွေးလေးမှာလည်း ခွက်ဝင်လိုက် ပြန်၍တက်လာလိုက်နှင့် လှိုင်းထနေသည်။ ကာမဂုဏ်အာရုံကို အထူးတလည် လိုက်စားသူလည်းဖြစ်၊ မိန်းမချင်းလဲဖြစ်သော ကြည်ပြာလင်းမှာ လင်းလဲ့ဖြူတစ်ယောက် သဘာဝစေ့ဆော်မှုဖြင့် ဂျော်နီသန်း၏ လီးကြီးကို သူမ၏အသွေးအသားတွေက တတ်နိုင်သမျှ ဆွဲသွင်းနေကြောင်း ကြည်ပြာလင်း သတိထား လိုက်မိပြီး သမီးလေး၏ အတွေ့အာရုံကို မဖျက်ဆီးလိုသဖြင့် မျက်ရည်အဝိုင်းသားဖြင့် တံခါးဝမှရပ်၍ ကြည့်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သမီးဖြစ်သူ၏ အဖြစ်ကိုကြည့်ကာ ဂျော်နီသန်း၏ လီးကြီး မြန်မြန်တစ်ဆုံး ဝင်သွားပါစေဟုလည်း ဆုတောင်းနေမိသည်။ ဂျော်နီသန်းက လီးကိုတစ်ဆုံးသွင်းထားရင်း လင်းလဲ့ဖြူ၏ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို စုပ်နေရာမှ သူမ၏ နို့လေးတွေကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့ပေးရင်း လင်းလဲ့ဖြူ၏ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို လက်ဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ “ အင်း…. ဟင်း…. ဟင်း… အန်ကယ်…. အန်ကယ်… ဟိုဟာကြီးက အထဲမှာ မလှုပ်တော့ဘူးလား…… လင်းလဲ့ အနေခက်လိုက်တာနော်…. အင်း…. ဟင်း….. ဟင်…..” ဂျော်နီသန်း ပြုံးလိုက်သည်။ လင်းလဲ့ဖြူ အလွန်အမင်း ခံချင်နေပြီ။ ဒါကြောင့် လီးကိုတစ်ဝက်လောက် တစ်ဝက်လောက် ထုတ်ထုတ်ပြီး လိုးပေးသည်။ “ ပြွတ်….ပလွတ်…..ဗြစ်….ဗြစ်…..အား….အင့်….. အား….အင်း… အင်း….ဟင်း….” ဆောင့်ခြင်း သဘောတရားကို လင်းလဲ့နားလည်သွားပြီ။ အသွေးအသား တွေကလည်း အဆမတန် ထကြွလာသဖြင့် ပြင်းပြင်းဆောင့်တာကိုလည်း လိုလားတောင့်တ၍ လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျော်နီသန်းကလည်း သူ၏လီးကြီးကို တစ်ဆုံးနီးပါးဆွဲထုတ်ပြီး ဆယ်ချက်လောက် ဆောင့်၍အပြီး……….. “ ပြွတ်…ပလွတ်…ဒုတ်….အား….အီး…ထွက်…. ထွက်ကုန်ပြီ…. အား…..အား….” လင်းလဲ့ဖြူ တစ်ချီပြီးသွားပြန်သည်။
ဂျော်နီသန်းက မပြီးသေး၍ ဆက်၍ဆောင့်သည်။ “ ပြွတ်….ပလွတ်….ဒုတ်….အမလေး… မရဘူး… မရဘူး…. အထဲမှာကျိန်းစပ်နေပြီ….” နာကျင်လွန်းလှသဖြင့် လင်းလဲ့ဖြူက အော်၍ငိုကာအပြော ဂျော်နီသန်းက သူ့လီးကြီးကို လင်းလဲ့ဖြူ၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ အရည်များ တမျှားမျှားဖြင့် တွဲ၍ထုတ်လိုက်သည်။ ထိုအခိုက် အခန်းဝမှ ကြည်ပြာလင်းက သူမကိုယ်ပေါ်မှ ထဘီကို ချွတ်ချပြီး အခန်းထဲသို့ ပြေးဝင်ကာ ကုတင်စောင်းတွင် မှောက်လိုက်သည်။ “ ဟင် ” “ ဟာ ” “ လာ…ဂျော်နီ မင်းပြီးချင်နေပြီမို့လား….. ကိုယ့်ကိုလုပ်ပြီး ပြီးလိုက်…. လင်းလဲ့ မခံနိုင်တော့ဘူး……” ဂျော်နီသန်းလည်း ဘာမှစဉ်းစားမရတော့ ကုန်းထားသဖြင့် နောက်သို့ပြူးတစ်၍ ထွက်နေသော ကြည်ပြာလင်း၏ စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့ သူ့လီးကြီးကို တေ့၍ ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။ “ ပြွတ်…ပလွတ်…ဒုတ်….အင့်….ဟင့်….” “အန်ကယ်က မာမီကိုလုပ်ပြီး ပီးမှာတဲ့….” လင်းလဲ့ဖြူ သူမ၏မိခင်ကို မနာလိုဖြစ်သွားသည်။ ဒါပေမယ့် လင်းလဲ့ဖြူ ဘာမှမတတ်နိုင် အစိမ်းသက်သက် အပျိုစင်လေးမှာ စံချိန်မှီ လီးကြီး၏ ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရပြီး နှစ်ချီဆက်တိုက်လည်း ပြီးထားတော့ တစ်ကိုယ်လုံးကိုင်ရိုက် ခံထားရသလို မလှုပ်နိုင်တော့သဖြင့် အိပ်ယာပေါ်တွင် ပေါင်လေးကားကာ ပက်လက်လှန်ရင်း လက်လေး တစ်ဖက်က သူမ၏စောက်ပတ်တွင် စိုရွှဲနေသော အရည်လေးတွေကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ် ကြည့်နေရင်း ဂျော်နီသန်းနှင့် သူမ၏ မိခင်တို့၏ တရှိုက်မက်မက် ဆောင့်ချက်တွေကို ပက်လက်လေးရီဝေစွာကြည့်နေပါတော့သည်။…ပြီးပါပြီ…